Lufthansa dia hisidina avy any Frankfurt mankany Zadar any Kroasia amin'ny fahavaratra 2018
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa dia hisidina avy any Frankfurt mankany Zadar any Kroasia amin'ny fahavaratra 2018
Desambra 20, 2017
Lufthansa dia manampy fifandraisana hafa amin'ny sidina avy any Frankfurt mankany amin'ny toeran-tany fizahan-tany any Kroasia miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina fahavaratra 2018. Aorian'ny Zagreb, Split, Dubrovnik ary Pula, ny sidina dia hisidina voalohany avy any Frankfurt mankany Zadar amin'ny taona 2018, manomboka amin'ny 28 aprily sy sabotsy, dia misy sidina Airbus A319 mankany amin'ny morontsirak'i Kroasia.
Zadar dia eo afovoan'ny morontsirak'i Adriatika sy eo afovoan'ny Dalmatia avaratra. Izy io dia ivon-toekarena, kolontsaina ary politika eo amin'ny faritra, miaraka amin'ny mponina 75.000 eo ho eo. Ny morony, ny nosy akaiky ary ny natiora madio dia malaza amin'ny mpizahatany avokoa. Ny vondronosy nosy kely lehibe sy 24 ary skerry 300, valan-javaboahary telo ary valan-javaboary dimy dia nametraka an'i Zadar sy ny faritra ao amin'ireo toerana fizahan-tany ambony any Kroasia.
Ny sidina miverina mankany Zadar dia efa azo amandrihana, miaraka amin'ny vidiny manomboka amin'ny 89 euro. Ny fampahalalana fanampiny sy ny safidy hamandrihana ny sidina Lufthansa dia misy amin'ny Internet ao amin'ny LH.com na amin'ny alàlan'ny Lufthansa Service Center izay azo tratrarina amin'ny +49 (0) 69 86 799 799 (antso ampaham-bola amin'ny taha mahazatra). Ny sidina dia azo alefa amin'ny alàlan'ny masoivohon'ny mpiara-dia amin'i Lufthansa sy ireo kaonteran'ny varotra Lufthansa any amin'ny seranam-piaramanidina.
Ilay fifandraisana vaovao indray mipi-maso:
• indroa isan-kerinandro (Sabotsy, Alahady, manomboka amin'ny 28 aprily 2018)
• LH1476: Sabotsy FRA 10:15 maraina - 11:50 maraina ZAD
Alahady FRA 4:30 hariva - 6:05 hariva ZAD
• LH1477: Sabotsy ZAD 12:35 pm - 2:15 pm FRA
Alahady ZAD 6:50 hariva - 8:30 alina FRA
• Halavirana: 835 km (451 kilaometatra nautika)
Krismasy vanim-potoana fitsangantsanganana mahasosotra indrindra; manidina amin'ny ankapobeny ratsy noho ny 5 taona lasa
Ny vondrona mpiaro ny mpizahatany dia mankasitraka ny fanoloran-tenan'ny Southwest Airlines amin'ny mangarahara momba ny sidina